Cryptographic Anomaly စျေး - အွန်လိုင်း CGA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Cryptographic Anomaly (CGA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Cryptographic Anomaly (CGA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Cryptographic Anomaly ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Cryptographic Anomaly တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Cryptographic Anomaly များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Cryptographic AnomalyCGA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.267Cryptographic AnomalyCGA သို့ ယူရိုEUR€0.228Cryptographic AnomalyCGA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.205Cryptographic AnomalyCGA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.245Cryptographic AnomalyCGA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.41Cryptographic AnomalyCGA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.7Cryptographic AnomalyCGA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč5.96Cryptographic AnomalyCGA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1Cryptographic AnomalyCGA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.356Cryptographic AnomalyCGA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.375Cryptographic AnomalyCGA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$6Cryptographic AnomalyCGA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.07Cryptographic AnomalyCGA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.44Cryptographic AnomalyCGA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹19.95Cryptographic AnomalyCGA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.45.22Cryptographic AnomalyCGA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.367Cryptographic AnomalyCGA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.408Cryptographic AnomalyCGA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿8.32Cryptographic AnomalyCGA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.86Cryptographic AnomalyCGA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥28.5Cryptographic AnomalyCGA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩316.7Cryptographic AnomalyCGA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦103.67Cryptographic AnomalyCGA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽19.59Cryptographic AnomalyCGA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴7.4
Cryptographic AnomalyCGA သို့ BitcoinBTC0.00002 Cryptographic AnomalyCGA သို့ EthereumETH0.000709 Cryptographic AnomalyCGA သို့ LitecoinLTC0.00498 Cryptographic AnomalyCGA သို့ DigitalCashDASH0.00309 Cryptographic AnomalyCGA သို့ MoneroXMR0.00309 Cryptographic AnomalyCGA သို့ NxtNXT21.56 Cryptographic AnomalyCGA သို့ Ethereum ClassicETC0.0397 Cryptographic AnomalyCGA သို့ DogecoinDOGE79.8 Cryptographic AnomalyCGA သို့ ZCashZEC0.0034 Cryptographic AnomalyCGA သို့ BitsharesBTS10.4 Cryptographic AnomalyCGA သို့ DigiByteDGB8.87 Cryptographic AnomalyCGA သို့ RippleXRP0.955 Cryptographic AnomalyCGA သို့ BitcoinDarkBTCD0.00936 Cryptographic AnomalyCGA သို့ PeerCoinPPC0.897 Cryptographic AnomalyCGA သို့ CraigsCoinCRAIG123.68 Cryptographic AnomalyCGA သို့ BitstakeXBS11.58 Cryptographic AnomalyCGA သို့ PayCoinXPY4.74 Cryptographic AnomalyCGA သို့ ProsperCoinPRC34.06 Cryptographic AnomalyCGA သို့ YbCoinYBC0.000146 Cryptographic AnomalyCGA သို့ DarkKushDANK87.04 Cryptographic AnomalyCGA သို့ GiveCoinGIVE587.49 Cryptographic AnomalyCGA သို့ KoboCoinKOBO61.84 Cryptographic AnomalyCGA သို့ DarkTokenDT0.246 Cryptographic AnomalyCGA သို့ CETUS CoinCETI783.35